कसरी ट्रेन द्वारा विद्यार्थी यात्रा युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > कसरी ट्रेन द्वारा विद्यार्थी यात्रा युरोप मा
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 27/11/2020)
युरोप मा विद्यार्थी यात्रा रेल मात्र मजा हुन सक्दैन, तर शैक्षिक र अर्थपूर्ण, धेरै. अझ महत्त्वपूर्ण धेरै विद्यार्थी (र आमाबाबुले) शायद विचार सबै व्यावहारिक छ, जीवन व्यवस्थापन कौशल विद्यार्थी स्वतन्त्र बन्न क्रममा सिक्नुपर्छ, स्व-निर्देशित, जिम्मेवार, संसाधन grownups! एक्लो विद्यार्थी यात्रा युरोप मा ट्रेन गरेर तपाईँले बस भन्दा बढी देखाउन सक्छौं सुन्दर ठाँउहरु.
आफ्नो व्यक्तिगत जीवन नेभिगेट गर्न सिक्दै, सामन्यतया, बस जान्नु महत्त्वपूर्ण छ के तपाईंको तालिका लागि हो विश्वविद्यालय. तपाईं सीधा एक गरेको रही विचार गर्न सक्दैन तपाईं एक रेल कसरी भेट्टाउने थाहा छैन भने, बजेट प्रबन्ध गर्नुहोस्, वा आफ्नो लुगा सफा गर्नुहोस्! तपाईको बारेमा जान्नको लागि उत्तम तरिका युरोपमा रेलमा यात्रा गर्नु हो. यसलाई वरिपरि प्राप्त गर्न टाढा सजिलो तरिका द्वारा छ र तपाईं हुँदासम्म आफ्नो अर्को कदम बाहिर आंकडा समय छौँ एउटा सुन्दर दृश्य आनंद. त्यसैले, कि यात्रा र के यो वास्तविक संसार मा बाहिर त्यहाँ जस्तै हो सिक्न. हामी तपाईं सुरु गर्न केही विचार दिएको छु.
ट्रेन हाम्रो पहिलो विद्यार्थी यात्रा हो: द Seine एक सत्र आनन्द
युरोपमा ट्रेन द्वारा विद्यार्थी यात्रा अचम्मै रमाइलो मात्र हो तर तपाईं स्मार्ट हुनुहुन्छ भने यो नि: शुल्क पनि हुन सक्छ! छ भन्ने कुरा एकदम पेरिस दुर्लभ! पेरिस ज्याज दृश्य मा क्रप को क्रीम आनन्द गर्न Seine गर्न रक्सी र टाउको केही सस्तो बोतल समातेर. पेरिस गर्न विद्यार्थी यात्रा रेल छ सुपर सजिलो, पनि यदि तपाईं भाषा बोल्दिन!
फ्रेडरिक Chopin भ्रमण, जिम मोरिसन, एडिथ पियाफ, र ऑस्कर Wilde मा पेरे Lachaise चिहान पेरिसमा, फ्रान्स
यो एक सानो अनौठो छ यदि तपाईंलाई लाग्छ कि हामी तपाईंलाई दोष छैन, तर वास्तवमा Pere Lachaise चिहान साँच्चै ठूलो छ! सुझाव: प्रवेश निःशुल्क छ; नक्सा डाउनलोड तपाईंको फोन वा ट्याब्लेटमा जानु भन्दा पहिले तपाईं प्रसिद्ध कबरहरू भेट्टाउनुहोस्.
हेरविचार4क्रोएशिया भालू
युरोप मा ट्रेन द्वारा विद्यार्थी यात्रा रमाइलोको भन्दा बढी हुन सक्छ. एक विद्यार्थी रूपमा, यसलाई आफ्नो आवेग पाउन समय लिन वा फिर्ता दिन महत्त्वपूर्ण छ! यदि तपाइँसँग समय छ बिदा, किन छैन? तपाईंले केही महसूस-राम्रो क्षणमा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, क्रोएशिया र यात्रा गर्न ट्रेन यात्रा गर्न समय लाग्न Kuterevo. क्रममा मदत चाहिन्छ जो खैरो भालू लागि शरणार्थी शिविरमा हुन जंगली मा पुन: प्रवेश गर्न. प्ले आनन्द, खुवाउनु, वा बस यी सुन्दर जनावरहरू हेर्दै.
एम्स्टर्डम गरेको चिडियाघर मा पुतलीहरु घेरिएको गर्न, हल्याण्ड
प्रकृति को विषय मा हामी गर्दा, अर्को स्टप एम्स्टर्डमको चिडियाखाना हो. को मा स्थित शहर चिड़ियाघर सुन्दर पुतलीहरूले भरिएको ठूलो ग्रीनहाउस हो. एक साँच्चै अद्वितीय अनुभव. चिडियाखाना पनि अन्य जनावर छ, यस्तो sloths रूपमा, kangaroos, र जगुआर! सुझाव: गर्मी मा यो खुला छ सूर्यास्त नभएसम्म र तिनीहरूले संगीत छ 6-8 रक्सी संग बजे.
एक एस्किमोको घर मा पिउन, प्रकारको, स्टकहोम मा Absolut आइस बार मा, स्वीडेन
स्टकहोम गरेको आइस बार, जो खुलेको 2002, शायद स्वीडेन सबैभन्दा मनाइन्छ मादक आकर्षण छ. थुतेर 70,000 यसको पहिलो वर्षमा आगंतुकों, बीबीसी र सीएनएन मा विशेष गरिएको छ, र पियर्स Brosnan र स्वीडेन आफ्नै Stellan Skarsgård जस्ता सेलिब्रेटीहरू द्वारा frequented गरिएको छ. यो स्थान साँच्चै वाक्यांश गर्न अर्थ नयाँ दिनुहुन्छ “ढुङ्गामाथि” अनुभव पूरा गर्न, पेय पनि खोक्रो सेवा गर्दै बरफ घन, बरफ ब्लक स्पष्ट बनेको एक पल्ट मा! किन यहाँ छुट्टी काम को लागि लागू गरेर आफ्नो विद्यार्थी युरोप मा ट्रेन यात्रा विस्तार गर्न. के तपाईं विद्यार्थी हुँदा, संसारको साँच्चै आफ्नो सिपी छ.
ब्रुग्स भ्रमण, Belgium like other Student Travel by Train
बन्द ब्रुग्स एक भ्रमण बेल्जियम मा आफ्नो रहन सुरु. ब्रुग्स बेल्जियम को पूर्व मा स्थित एक सानो शहर छ. तस्वीर cobbled लेन र काल्पनिक नहरहरुमा, र बजार वर्गहरूको soaring टावर संग लहरै, ऐतिहासिक चर्च, र पुरानो whitewashed almshouses. त्यहाँ एक विशेष छ आकर्षण मा वसन्त जब daffodils ऐतिहासिक begijnhof घट्दैछ को शांत चोकमा गलैँचा, वा जाडो (बाहेक क्रिसमस) तपाईं भव्य यदि चिसो हुन सक्छ जब, आफैलाई लगभग एक शहर.
यात्रा delirium क्याफे
तपाईं हुनुहुन्छ भने एक पक्ष बढी देख, बस ट्रेन गरेर अन्य सँगी विद्यार्थी यात्रा जस्तै ब्रसेल्स एक रेल मा त हाम फाल्न, and visit delirium क्याफे जहाँ तिनीहरूले छ 2500 प्रकार को बियर ट्याप! यसलाई पाउन धेरै सजिलो छ. तपाईं गुलाबी हात्ती को बदनाम delirium साइन सम्झना गर्न सक्दैन.
Ibiza मा एक पक्ष जाने, स्पेन
केही तपाईं जवान हुँदा तपाईंलाई मात्र प्राप्त गर्न सक्छन् दूर कुराहरू, रात partying(को) Ibiza मा दूर तिनीहरूलाई मध्ये एक छ! खोल्ने वा बन्द मा Ibiza एक रेल मा जानुहोस् हप्ता एक वास्तविक अनुभवको लागि! These two weeks, को उद्घाटन भइरहेको मई र मा बन्द अगस्ट / सेप्टेम्बरमा, सबै दुनिया भर देखि विशाल अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार पाहुना.
जाऊ त्यहाँ द्वीप, युरोप सबैभन्दा ठूलो संगीत महोत्सव बुडापेस्ट, हंगेरी
तपाईं को ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ भने संगीत उत्सव तपाईं Sziget एक प्राथमिकता गर्नुपर्छ. हरेक वर्ष यो हप्ता लामो तिहार विशाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रेरित गर्न पाहुना खेल्छ तपाईं गर्न सक्छन् या त यो मा शिविरमा, वा बुडापेस्ट रहन जो तिहार शहर को केन्द्र मा एक द्वीप मा ठाँउ लिन्छ रूपमा सिर्फ एक पत्थर गरेको फेंक टाढा छ! and many students like you Student Travel by Train there.
भूत शिकार एडिनबर्ग मा जानुहोस्, Scotland asaStudent Travel by Train
सम्म व्यस्त एडिनबर्ग सडकमा तल त्यहाँ एक गाढा निहित, शान्त, भूल स्थान. मध्य-1980 को दशक को एक सेट मा भूमिगत Vaults पत्ता थिए - झन्डै दुई सय वर्ष त्यागेर गरिएको थियो Chambers. यी अद्भुत गाढा कोठा पुरातन एडिनबर्ग पत्थर को निर्माण गरिन्छ, arched छत संग, फायरप्लेसहरू, र 18औं शताब्दीका रक्सी Vaults. तपाईं भूत विश्वास छैन भने यो भ्रमण एडिनबर्ग को इतिहास साँच्चै रोचक बनाउँछ. यो पूर्ण रूपमा पनि लायक छ 13 quid (11 के तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने!).
त्यसैले लिन धेरै युरोपेली ट्रेन यात्रा, त्यसैले प्रेम पर्नु गर्न थुप्रै ठाउँमा! हामी तपाईं ट्रेन द्वारा एक विद्यार्थी यात्रा रूपमा भ्रमण सक्छ के को बस एक झलक प्रस्ताव. एउटा ट्रेन बचत गर्नुहोस् and travel to any place your heart desires in Europe.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstudent-travel-by-train%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml र तपाईं / RU वा / tr र अधिक भाषा गर्न / fr परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#fun यूरोपेन्ट्रावेल विद्यार्थी विद्यार्थी रेल स्टेशन रेल यात्रा यात्रा